FRANCISTOWN, GABERONE —
Chaminuka akapihwa basa iri svondo rino pahurongwa hwakaitirwa muFrancistown.
Chaminuka anoti ari kutanga kurairidza chikwata chake nemusi weSvondo apo chiri kutamba neOrapa United FC munhandare yeFrancistown Sport Complex. Mutambo uyu ndiwo uri kuparura mwaka wake mutsva wenhabvu muBotswana.
Chaminuka, uyo akamborairidza zvikwata zveMbabane Highlanders neMatsapha United kuEswatini, anoti chikwata chake chiri kuda kutenga vatambi vatatu vanobva kuZimbabwe senzira yekuti chisimba mumakwikwi emwaka uno.
Mumwe wevateweri vechikwata cheTAFIC, VaAmos Mhandu, vanoti vanotarisira kuti Chaminuka achazadzikisa chivimbiso chake chekupedza makwikwi emukombe uyu chikwata chake chiri pakati pezvikwata zvichatamba zvinonwisa mvura mwana uno.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotevera nhabvu yemuBotswana, VaElisha Machaka, vanoti Chaminuka anogona kusvibisirwa zita rake nekurairidza chikwata cheTAFIC nokuti chikwata ichi chagara chichiita mutauro.
Sachigaro wechikwata chinoziikanwa nerekuti Machimenyenga Boys mune zvemitambo yenhabvu, VaCarlos Sebina, vanoti Chaminuka ane hunyanzvi hwakadzama munyaya dzekurairidza nhabvu.
Chaminuka, uyo akamborairidza zvikwata zvinoti ZPC Kariba, Dynamos, Buffaloes, nezvimwe zvikwata, achange achitarisana navamwe varairidzi vanobva kuZimbabwe vanosanganisira Madinda Ndlovu, Blessing Moyo naParadzayi Mandivenga.